I-Apple SE 2 ye-Apple izoba yifoni okungekho muntu oyifunayo ngempela - Tamban RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM I-Apple SE 2 ye-Apple izoba yifoni okungekho muntu oyifunayo ngempela
Ngenhlanhla, i-Apple isebenza ngokulandelayo kwe-iPhone SE. Izindaba ezimbi ukuthi idivaysi, okungenani ngokusho kwamanye amahemuhemu okuqala ajikelezayo, ngeke kube yithuluzi eligcinelwe abasebenzisi be-iPhone SE.
Ngenkathi amahemuhemu e-Apple esongeziwe, abahlaziyi uMing-Chi Kuo eminyakeni yamuva nje ukhombisile ukuthi unembile ngokwengeziwe ngokubikezela kwakhe. Muva nje, uKeo ushicilele a inothi yocwaningo okukhombisa ukuthi i-Apple SE 2 ye-Apple izosizakala kwifomethi efana ne-iPhone 8, enesikrini esingu-4,7 inches. Ngaphezu kwalokho, i-iPhone SE 2 izofaka inzwa ye-Touch ID, iprosesa yakamuva ye-Apple A13 nekhamera ye-lens eyodwa ngemuva.
Kuzwakala kukuhle, kepha i-iPhone SE 2 izoba nesimo. Isici esifana naleso se-iPhone 8. Ukuheha okukhulu kwe-iPhone SE ukunikela abasebenzisi abasezingeni eliphakeme ngefomethi ehlanganisiwe, into eba nzima ukuthola lapho izinkampani ezinjenge-Apple ziqhubeka nokukhiqiza amadivaysi ngezikrini ze-gargantuan. I-iPhone SE 2 empeleni ichazwa yisikrini sayo se-intshi i-4 kanye nefomu layo elihlanganisiwe, umklamo owenza ukuthi kube lula ukuthi ithuluzi lisebenzise kalula ngesandla esisodwa.
Uma umbiko kaKoo unembile, okuyinto engavamile. Isibonelo, abanye abahlaziyi bakholelwa ukuthi i-iPhone 8 izosiza ukukhulisa ukuthengiswa kwe-iPhone ku-2020, njengoba amakhasimende asasebenzisa imodeli ye-6 ne-7 azokhangwa. inani eliphansi le-iPhone SE 2.
Nansi inkinga, noma kunjalo; i-iPhone 8 isivele itholakala ngentengo enhle. Uma amakhasimende efuna inketho engabizi yokuthuthukisa, isivele ikhona. Ngokwazi kwami, kubonakala sengathi i-Apple imane icabangele ukuthuthukisa i-iPhone 8 ngezakhi zanamuhla zangaphakathi nekhamera ethuthukile kakhulu. Ake sithi nje le akuyona ithuluzi elifanele igama lesidlaliso le-iPhone SE 2.
Eminyakeni yamuva nje, abalandeli abaningi be-iPhone SE baphuphe ngedivaysi ecwebile enombukiso onqenqemeni, onjengalowo owethulwe yi-Apple nge-iPhone X futhi okuboniswe ngomqondo ongezansi.
Ngeshwa, uma i-iPhone SE 2 ifakelwe i-ID ID, iya ngokungasho ukuthi ngeke sibone ukwakheka okucashile onqenqemeni lwesikrini se-onboard, kodwa kunalokho i-iPhone 8 ebuyekeziwe ngesikhalazo esilinganiselwe.
I-iPhone SE yasekuqaleni yagcwalisa igebe emugqeni womkhiqizo we-Apple, futhi kwamethusa ukubona i-Apple inganaki ngokuphelele ngezizathu ezaziqhubela iminyaka emine manje. Okwenza konke lokhu kumangalisa kakhulu ukuthi i-iPhone SE isibonakalise ukuthi ithandwa kakhulu kunalokho i-Apple ebengakucabanga.
"Sijabule ngempendulo esiyibonile," kusho uTim Cook nge-iPhone SE. ngesikhathi se-teleconference ngemiphumela ye-2016. "Kucace bha ukuthi kunesidingo, ngisho nangaphezu kwalokho ebesikucabanga."
Ukufunwa kwaba umphumela wesici sefomu, hhayi inani. Ngethemba ukuthi i-Apple izokwazisa lokho futhi inikele nge-iPhone 2 SE ukuthi amakhasimende azofuna ngempela.
Lesi sihloko sivele kuqala https://bgr.com/2019/10/09/iphone-se-2-release-features-display/
Notre nouveau scooter électrique préféré vient de tomber à 248 $, un record – BGR